In wax xun la dareemo - Youmo
Att må dåligt - somaliska
Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan inuu qofku xanuunsanyahay.
Qofkastaa marmar ayuu wax xun dareemaa. Waxa laga yaabaa inay wax xun kugu dhaceen ama inaad is weydiinayso sida ay wax noqon doonaan. Marmarka qaarkood ayaad xanuun dareemi kartaa adigoon sababta garaneyn. Waxa jira waxyaalo adigu aad sameyn karto si aad uga roonaato. Waxaad sidoo kale heli kartaa caawimo si aad uga roonaato.
Halkan waxa lagu qeexayaa siyaabaha kala duduwan ee maskax ahaan wax xun loogu dareemo. Waxa laga yaabaa inaad iska dhex aragto mid ka mid ah? In la xanuunsanaayo ma aha micnaheedu inaad daciif tahay mana ahan wax laga xishoodo. Dadkoo dhammi marmar ayay sidaasi ku dhacdaa. Waxa jirta caawimo wanaagsan oo la heli karro haddii aad u baahan tahay.
Waxaad baqdin dareemi kartaa mudo dheer ka dib. Waxaad u baahan kartaa caawimo si aad u dareento amaan mar labaad.
Filim: Cidna aniga iima adkeysan karto
Emil ayaan sida xun ee uu dareemaayo aan waligii cidna kala hadal.
Su’aal: Anigu in badan ayaan ka war sugaayay go’aanka magangalyo-doonkayga intaa wax ka badana ma qaadan karo
Filim: Hada waxaan joojiyay in aan iibiyo galmada iyo in aan qaato maan-dooriye